Cabral Libii inopa mabasa ake semurevereri padivi reNI John Fru Ndi - TELES RELAY
HOME » KWEZVISUNGO Cabral Libii inopa mabasa ake semurevereri padivi reNI John Fru Ndi
Cabral Libii inopa mabasa ake semurevereri padivi reNI John Fru Ndi
The itsva National purezidhendi Cameroonian Party kuti National Reconciliation (CNRP) akaita kuroorwa panguva anoratidza Hurukuro China May 16 2019, vakaisawo ne Dipita Tongo.
Cabral Libii muKubvunzurudzwa neStV - Photo Capture
Munguva kushanya Prime Minister, Musoro Hurumende Bamenda kuzivisa raitevera Dialogue kuti dambudziko iri vari munharaunda, Anglophone, sachigaro SDF ave aida svitsanisa panhaurirano. Mazuva mashomanana gare gare, Cabral Libii anotsvaga kuti ataurirane pamwe neSADF National President. "Neniwo zvamaronga ave murevereri pamwe Ni John Fru nDi kugadzirisa dambudziko iri ... separatists ngavaise pasi maoko avo uye masoja vanofanira kudzokera yemauto kutaura divi rake vanofanira asike zvinhu kuti nhaurirano," yakashuma yechitatu mumusarudzo wekupedzisira wepurezidhendi ye2018 muCameroon.
Panguva yekutambiswa kweChabral Libii inotsanangura kuti inoramba iripo iye zvino muNational Coordinator wekufamba kwemamiriyoni ane gumi nemarudzi. Maererano naye, "OMC inofambisa hurumende inofambisa vanhu kunyoresa pakusarudzwa kwemasarudzo uye inobatsira vechidiki kuti vaite sarudzo dzemasuo ehurumende nemitemo pasinei nebato rezvematongerwe enyika."
Mugovera May 11 2019, Va Cabral LIBII Li NGUE, General Coordinator shamwari gumi nomumwe Million Vagari uye rakava rechitatu ari wenyika musarudzo October 07 2018, akasarudzwa panguva guruundano zvakakodzera akazivisa Sub-Prefecture pamusoro Guidiguis, Mayo-kani dhipatimendi muna Far North nharaunda, national purezidhendi CAMEROONIAN Party nokuti nATIONAL kuyanana (PCR .N) mu dzose rakapfupikiswa "The paca they".
Iri sangano iro hofisi yakanyoresa kuJaounde yakanyorerwa mu2003 naPresident of Territorial Administration.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lebledparle.com/actu/politique/1107738-crise-anglophone-cabral-libii-propose-ses-services-comme-mediateur-au-cote-ni-john-fru-ndi
Maurice Kamto anopa zvitsva zvitsva - CAMEROON MAGAZINE
"Maurice Kamto anoedza kushandisa sangano renyika dzakawanda kudzima nyota yake yekutonga"